विश्वास आन्दोलन बारे दाऊदले Wilkerson | Apg29
"पास्टर भने, यो हालसम्म, एक दिन छ, एक इंजीलवादì
"यो येशू ख्रीष्टको सबैभन्दा ठूलो humiliations एक ख्रीष्टको देखि अभ्यास छ यो भ्रष्ट सुसमाचार रकम विषाक्तता छ -।। पनि चीन, अफ्रीका र संसारभरि यो एक अमेरिकी सुसमाचार आविष्कार र धनी अमेरिकी प्रचारकहरू र pastors द्वारा फैलाउन धनी छ।! "
हामी यसलाई फेरि लिन तपाईंले पहिले नै त्यसो गर्नुभएको छैन भने तपाईं खुलारूपमा बुझ्न त। म परमेश्वरले घोषणा गर्न झूटा विचार मलाई सुरक्षित कृतज्ञ छु र म पाप झूटा शिक्षा प्राप्त भएको यो स्वीकार।
तपाईं के यो जस्तै स्वीडेन परमेश्वरको मान्छे आज देखिन्छ भन्दा सन्ताप? दुलही को र्याप्चर बारेमा कुरा कहाँ छ? कहिलेकाहीं यो मसीहीहरूको बहुमत एटिक्राईष्ट मा अधिक केंद्रित भनेर येशूले भन्दा प्रमुख आउनेछ फिर्ता छन् जस्तो देखिन्छ!
के तपाईं येशू आउन लागि तयार छन्? क्रुसको को कुरा, जब तपाईं नवीनतम, 1886 सुने?
अब तपाईं दाऊदले Wilkerson बारेमा अलि पढाइ उहाँले विश्वास आन्दोलन बारे लेखे के प्राप्त।
यो अपमानित सभा
मूल अंग्रेजी शीर्षक टोलीहरू पनि Solemn सभा को निन्दाले
द्वारा दाऊद Wilkerson
सपन्याह 3: 18- ती तिनीहरूलाई म भेला गर्नेछु को Solemn लागि उदास छन्, तँ भएकाहरूलाई, अपमान को कसलाई गर्न बोझ। (1917)
यो सपन्याह को एक दोहरी भविष्यवाणी छ। तिनीहरूले इस्राएलका बच्चाहरु संग तर पनि आध्यात्मिक सियोन (अन्तिम दिनमा येशू ख्रीष्टको चर्च छ) संग के गर्न छ। सबै को पहिलो, उहाँले यहूदीहरूलाई बोल्छ - परमेश्वरले छरिएका सँगै ल्याउन भनेर - तर उहाँले मात्र इस्राएलका दयनीय अवस्था को लागि एक भाँचिएको हृदय थियो गर्नेहरूलाई फिर्ता ल्याउने - परमेश्वरको मा गए सबै भयानक कुराहरू - उहाँले अपमान जन्माई सबै सम्झना हुनेछ घर। को बोझ लगे गर्नेहरूलाई, उहाँले भन्नुभयो; "म तपाईंलाई भेला हुनेछ।" उहाँले तिनीहरूलाई ठूलो प्रतिज्ञा दिनुभयो
यो भविष्यवाणी पनि पछिल्लो दिनमा येशू ख्रीष्टको चर्च सम्बोधन गरिएको छ। पुरानो नियममा, इस्राएलका सन्तानहरू एक भोजमा सात दिन भनिन्थ्यो। आठौं दिनमा - एक Solemn विधानसभा भनिन्छ। सबै अरू पन्छाएर उपासना र आफ्नो स्वर्गका पिताले प्रशंसा ध्यान - यो तिनीहरूले सँगै भेट कि त थियो। पद यसो भन्छ: "आठौं दिनमा तपाईं एक Solemn विधानसभा हुनेछ।" यो भोज संग्रह पुरानो नियमका परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रभु पूरा गर्न आवश्यक विभाजित प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो पछिल्लो दिनमा येशू ख्रीष्टको चर्च छ। सपन्याह अनुसार, पछिल्लो दिनमा परमेश्वरको घर अपमानित गर्न। हिब्रू शब्द यहाँ "लाज र निरादर" हो। यो लाज हुन र परमेश्वरको घर अनादर हुनेछ। हामी धर्मत्यागी, उदार आधुनिक चर्चको बारेमा कुरा छैन - प्रभु न्यायको दिन उहाँले चर्च सामना गर्नेछ भनेर भन्छन्। हामी तिनीहरूलाई लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं, तर हामी वास्तविक सभा हो भनेर यसलाई हाम्रो आँसु बर्बाद हुँदैन।
भगवान शोक र यी दिनमा येशू ख्रीष्टको चर्च विकास कि अपमान लागि रुन्छ गर्न चाहने एक मान्छे खोज्दैछ। म पेन्तिकोसमा जन्मेको चर्चको बारेमा कुरा गर्दै छु। म पावल र प्रेरितहरूले 'शिक्षण गर्न जन्मेको चर्चको बारेमा कुरा गर्दै छु। शासन गर्न येशू ख्रीष्टको सत्य मा जन्म भएको थियो भन्ने मण्डलीको। को जन्म चर्च आक्रमण हो। विधानसभा आफूलाई एकदम तुच्छ छ।
परमेश्वरको गर्दा यो सबै विधानसभा अतिक्रमण गरेर idly बस्न छैन कि एक शेष हुनेछ - त्यो अपमान, लाज र infamy यस समयमा परमेश्वरले शोक गर्ने र यस प्रदूषण अधिक रुन्छ पवित्र शेष अप उठाउनु हुनेछ भविष्यवाणी गरिएको छ। भगवान भन्छन्: "म एक राम्रो जीवन बिताउन सामग्री गर्ने छैन र quacks र पैसा पागल झूटा अगमवक्ताहरू बेवास्ता परमेश्वरको घर आउन र सबै नष्ट एक मान्छे छन्।"
परमेश्वरले यस भन्दा सन्ताप गर्ने मान्छे भेला हुनेछ - यदि तपाईं साँच्चै प्रभु प्रेम र उहाँको चर्च प्रेम, तपाईं आज के भइ रहेको छ (र म नाम यी humiliations उल्लेख हुनेछ) मा हेर्न सक्दैन। म, यी humiliations बारेमा भन्न चर्च घर हिंड्न र, "भन्न म मत्ती 18 मा लेखिएको छ के अपनाउँछन् गर्न सक्छन् के सुन्दा, नरक को ढोकाहरू सम्मेलन गर्न खडा गर्नेछ भने, म मेरो चिन्ता छैन, परमेश्वरको नियन्त्रणमा सबै कुरा छ।
यसलाई पर्याप्त छैन। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्दछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई आफ्नो काम गर्न प्रयोग गर्दछ। उहाँले स्वर्गदूतहरू पठाउन छैन। स्वर्गदूतहरू यो भन्दा बढी रुन्छ, तर परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग गर्दैन। - उहाँले भङ्ग हृदय र बोझबाट संग पुरुष र महिला प्रयोग गर्दछ। न्याय ढोका येशूले छ। प्रभुको दिन नजिकै छ।
माथि प्राचीन उठाउनका। माथि pastors उठाउनका। माथि गोठालाहरूले उठाउनका।
चर्च मा हेर्नुहोस्। यस राई प्राप्त गर्नुहोस्। यसलाई लगाउने। हामी किन यो Solemn सभा अपमान को बोझ लिनु थियो? खराब बीउ रोपे गरिएको छ किनभने योएल ", भन्नुभयो।
एक सुसमाचार कि सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो गर्न दृष्टि मा सबै हुन्छ प्रचार गरे। सबै ईश्वरीय हरियो र र शुद्ध सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो छ। बीउ ruttet- मानिसहरूले परमेश्वरको शुद्ध शब्द सुन्न भोक छन् तर त्यहाँ कुनै Meadows छन्। बथानलाई त्यागेर भोक छ। नदीहरू बाहिर सूखी। एक अनौठो आगो को pastors भक्षण छ। इजकिएल गोठाला असल क्षेत्रहरू तल trampling र आफैलाई लागि सबै भन्दा राम्रो खान छन् भनेर भन्छन्। आज येशू ख्रीष्टको चर्च मा भइरहेको सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा के हो?
यो येशू ख्रीष्टको सबैभन्दा ठूलो humiliations ख्रीष्टको देखि अभ्यास को छ। पनि चीन, अफ्रीका र संसारभरि - यो भ्रष्ट सुसमाचार रकम विषाक्तता छ। यो एक अमेरिकी सुसमाचार आविष्कार र धनी अमेरिकी प्रचारकहरू र pastors द्वारा फैलाउन छ। धनी!
यो मलाई यति धेरै मानिसहरू बैंड सुन्न र तिनीहरूलाई भन्दा रो बिना यी समृद्धि सम्मेलनहरुको बाहिर आउने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कि appalled बनाउँछ। यो विष संसारभरि फैलाउन छ। क्युबा खोल्न बारेमा छ, र तिनीहरूले सुसमाचार आफ्नो सफलता एक समय मा प्राप्त र तिनीहरूलाई बताउन उत्सुक छन्, "तपाईं पर्याप्त लामो गरिब छन्, परमेश्वरले सबै Cubans धनी हुनुपर्छ चाहन्छ।"
यो हप्ता म केनेथ कोपल्याण्ड गरेको सभाहरूमा रेकर्ड गरियो भिडियो टेप पाए। म वक्ता सुने र dumbfounded भयो। मित्र नयाँ नियममा पढ्न, तपाईं प्रेरित पावलले झूटा प्रेरितहरू थिए विश्वास गर्नेहरूलाई औंल्याए कि पाउनुहुनेछ। उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभयो र उहाँले आफ्नो नाम उच्चारण। म तिमीलाई म तपाईंलाई भन्न के सुन्न भने, तर शोक, त्यसपछि तपाईं अन्धो हो भनेर बताउनुहोस्। तपाईं आध्यात्मिक तवरमा अन्धो हो। तपाईं हार्ड हृदय छ। एक कठिन हतियार संग मनले वरिपरि शुद्ध सुसमाचार यो भित्र पस्नु छैन भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं आफ्नो दायाँ मन छैनन् कि यो बाँणशैली सुसमाचार संग यति Saturated भएका छन्। तपाईं सत्य प्रचार गर्न सक्दैन। तपाईं आफ्नो हृदय भन्दा एक हतियार छ किनभने तिनीहरूलाई लेखन मा केहि देखाउन सक्दैन। हार्ड हृदय।
तपाईं केही यो प्राप्त हुनेछ। तपाईं कोपल्याण्ड वा Hagin गरेको टेप आफ्नो प्राण प्रविष्ट गर्नुभएको छ भने, तपाईंले के सुन्न मन छैन। साथीहरू, म गोठालो, छु म परमेश्वरले भनिन्छ गरिएको छ। म यो चर्च एक प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। लामो हामी यो rostrum मा खडा रूपमा, हामी बगालको चोरी आउनुभएका भेडा लुगा मा ब्वाँसा, हामी खडा र चिच्याउने गर्नुपर्छ देखे। यो बारेमा कुरा गर्न तपाईं सम्म छ। म यो हप्ता बसे र एक सम्मेलन मा एक वक्ता सुने र म स्तब्ध र चोट थियो। एक प्रभुको दुःखको मलाई आए। किन म यो सन्देश प्रचार गर्ने हो। यो भन्दा शोक।
म भने थियो के शब्द को लागि शब्द उद्धृत। स्पिकरहरूमा शायद किनभने जो आए सबै मानिसहरूको समाप्त बोल्न र आफ्नो pockets पैसा राख्न सकेन। कारण तिनीहरूले बाहिर आउन र आशिष् गर्न चाहनुहुन्छ भने ", भन्न छ कि नयाँ सिद्धान्त छ, त्यसैले ऊ धेरै उहाँलाई धेरै प्राप्त छ किनभने तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा अनमोल इंजीलवादी वा पास्टर फेला पार्न आवश्यक छ जसले सानो, उहाँलाई देखि लगिनेछ छ पनि के। तपाईं सबैभन्दा अनमोल सफलता प्रचारक फेला पार्न र उसलाई पैसा दिन भने, र तपाईं आशिषित हुनेछ। तपाईं सबैभन्दा अनमोल छन् गर्नेहरूलाई दिन यदि थप अनमोल, उहाँले छ - "यो एक पिरामिड योजना जस्तै हो। यी मानिसहरू सांसारिक संसारमा थिए भने, तिनीहरू जेल मा अन्त हुनेछ। पिरामिड योजनाहरु। शीर्ष छ र जो जो एक भन्दा पवित्र हुन थाल्छ, र साउंड कुरा गर्ने। मान्छे सयौं आफ्नो pockets भरी थिए सम्म आए। "यो निःशुल्क सुसमाचार छ? पापी भन्छन् बैंकनोट्स? "
के भने थियो सुन्नुहोस्। वक्ताले सामाजिक सहायताको तपाईं5डलर दिन्छ प्राप्त गर्ने एक गरिब विधवा बारेमा, उठे र भने, त्यसैले तपाईं यसलाई लिनुपर्छ, एलिया विधवा अन्तिम खाना लिए। तपाईंले यसलाई योग्य, अभिषिक्त छन्, ले। म एक 1,000 वर्ग फुट घरमा बस्न "यही वक्ता भन्नुभयो,"। म अब एक बडा निर्माण हुनेछ। एक राजा सुलेमानले गर्व हुनेछ। म एक कुकुर लागि बस 15,000 अमेरिकी डलर भुक्तानी। तिमी मेरो औंला मा भव्य घन्टी देख्नुहुन्छ, म जमाइका हालै थियो र यसको लागि 32,000 अमेरिकी डलर भुक्तानी। म मान्छे म मेरो हवेली विगतका चलिरहेको जहाँ प्रत्यक्ष जब कि थाहा र driveway मेरो रोल्स-रोयस हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरू त्यहाँ स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर थाह छ। "
मलाई भन्नुहोस्, सुसमाचार छ? भन्नुहोस् मलाई, छैन यो भन्दा बढी रुन्छ?
वक्ताओं को एक उठे र भने, "हामी भाइ कोपल्याण्ड एउटा करारमा गरेका अर्को वर्ष भन्दा, हामी कुनै पनि एक दिन ग्रस्त छ। हामी निराश को एक क्षण महसुस हुँदैन। हामी बिरामी वा केहि आवश्यक छैन। हामी सबै आशिष्हरूको आनन्द उठाउन गर्नुपर्छ। हामी सबै दुःख, सबै दुखाइ, सबै वित्तीय समस्या अस्वीकार। " तपाईं माथि छन् भने यो राम्रो सुनिन्छ।
यो के मलाई सबैभन्दा grieves। यो प्रचार गरियो। "पवित्र आत्मा तपाईं मुद्रा प्रवाह छन् नगरेसम्म खन्याइएका गर्न सकिन्छ। तपाईं सफल पवित्र आत्मा केहि गर्छ सक्नुहुन्छ छैनन् अघि। "
यसको बारेमा सोच्नुहोस्! यो तपाईं कसरी असर गर्छ? के तपाईं मुख हात बाट बस्ने गरिब मान्छे देख्न गर्दा र अचानक उहाँले "पैसा खोज्न" र मान्छे पागल जस्तै चलिरहेको र तिनीहरूले चलाउछन, तिनीहरूले हामी भन्न भन्छन् आफ्नो आत्मा मा बनाउँछ "हामी धन दाबी गर्छन्।"
त्यसपछि म मान्छे आफ्नो कुर्सियों बाहिर र तल्ला मा साँप जस्तै क्रल हेर्नुहोस्। म इंजीलवादी खडा र एक सर्प र मान्छे जताततै झर्ने जस्तै फुफकार हेर्न। साथीहरू, के रहेको छ?
högtidsförsamligen को अपमान! अगमवक्ता तिनीहरूलाई "लोभी कुकुर, अभक्त watchmen" भनिन्छ। मित्र, तपाईं परमेश्वर र प्रभुको दुःखको हृदय यशैया बाहिर रुन्थ्यौं थियो भने, उनीहरूले सुतिरहेको अन्धो watchmen, नजान्ने, लाटा कुकुर, मायालु सुत्न, पर्याप्त छ कहिल्यै गर्न सक्छन् जो लोभी कुकुर छन्।
"म 1,000 वर्ग मीटर छ तर म यसलाई बेच्न, र म राजा सुलेमानले in- बाँच्न सक्छ एक घर बनाउनेछ" कहिल्यै पर्याप्त प्राप्त गर्न। उहाँले भन्नुभयो, "बुझ्न सक्दैन गोठालाहरूले, सबैलाई उनको लागि देख छ, आफ्नै आवश्यकता पूरा प्राप्त गर्न केहि। यर्मिया कुनै शब्द बचाउनुभयो। उहाँले मेरो मान्छे जस्तै हराएको भेडा छन् ", भन्नुभयो। 1-10: आफ्नो गोठालाहरूले तिनीहरूलाई हराउनु जाने ", तपाईं" तपाईं म ठिक छु लाग्छ भने इजकिएल 34 पढ्नुहोस् कारण पादरी, तपाईं यस विषयमा यति कडा बोल्न कुनै अधिकार "।।।
तपाईं विधवा देखि 50 लाख लिन र SEK 150 000 को लागि एक कुकुर किन्छ। तपाईं विधवा र गरिब बाट अवकाश लिन र उनीहरूले पर्याप्त विश्वास छैन भनी बताउन - तिनीहरूले सफल छैन किनभने। तपाईं भेडा बाट ऊन लिन। तपाईं प्राण लागि देख छैन मुद्रा को लागि खोज। "गोठालाहरू त्यसैले, तपाईं गोठालाहरूले, प्रभु को शब्द सुन्न, आफूलाई र बगालको fatten। यसरी प्रभु आफ्नो परमेश्वरको भन्नुभयो, हेर्न म गोठालाहरू विरुद्ध हुँ, र म तिनीहरूका हात बाट बगालको चुक्ता हुनेछ, र तिनीहरूले बथानलाई खुवाउन रोक्न पर्छ। न त तिनीहरूले म तिनीहरूको मुखबाट बगालको सुम्पिदिनेछन्, र तिनीहरू अब आफ्नो शरीर हुनेछ, अधिक आफूलाई fatten गर्नुपर्छ। "
म यी मानिसहरू दाँत को बथानलाई छुटकारा हुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई मदत।
दोश्रो, अनमोल पवित्र आत्माको बङ्ग्याउन। यो सबैभन्दा खराब अपमान हो। यसले हामीलाई हाम्रो अनुहार मा गिर बनाउन हुनेछ। पवित्र आत्मा सारा संसारमा विकृत गरिनेछ जसमा तरिका हो।
यसलाई त्यहाँ चर्च र धेरै pastors र चर्च नेताहरूले बीचमा बाँकी त सानो खुट्याउने छ भनेर याद गर्न दुःखी छ। तिनीहरूले पवित्र आत्मा विकृत वा blasphemed गर्दा पनि थाहा छैन। त्यहाँ जो पुनरुद्धार अभियान जानुहोस् र तिनीहरू पवित्र आत्मा आउँछ विश्वास कुराहरू हेर्न मसीहीहरूको हजारौं छन्, तर तिनीहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ के थाहा छैन। तिनीहरूले ताली बजाऊ र जब मानिस मञ्चमा खडा र निन्दा र पवित्र आत्मा misrepresenting परमेश्वरको प्रशंसा, र तिनीहरूले यसको बारेमा थाहा छैन।
अमेरिकी पेन्टेकोस्टल आन्दोलन सहित सम्पूर्ण Charismatic संप्रदाय, झूटा revivals द्वारा अलग भताभुङ्ग। कुरा सबै किसिमका हुन - लगभग हरेक हप्ता नयाँ कुरा। नेताहरू अँगालेको वा सराप्न कि थाहा छैन। तिनीहरूले के थाहा छैन। हामी संसारभरि देखि pastors सयौं देखि अक्षरहरू प्राप्त। तिनीहरूले सोध्न। "के सही हो र के गलत छ?" नेताहरू कहाँ छन्? हामीलाई डोऱ्याउन सक्छ जो कसैले कहाँ छ?।
साथीहरू, पवित्र आत्मामा के हामी revivals भनिन्छ के आज भइरहेको हेर्न र के भइरहेको छ, हामी लिपिको लागि आधार फेला पार्न सक्नुहुन्छ। हामी धर्मशास्त्रको पाउन सक्दैन केहि अस्वीकार गर्नु पर्छ। पूर्ण अस्वीकार!
म मान्छे मलाई देश भर देखि पठाइरहेका छन् कि यी भिडियो हेर्न जब म रुन। सम्पूर्ण मण्डली नियन्त्रण बाहिर, गिरने भुइँमा, hysterically, हाँसेको drunkards जस्तै वरिपरि विचलता, साँप जस्तै घुमाई, जङ्गली जनावर जस्तै गरजना। हामी जो अप खडा र पवित्र आत्मा उहाँमा embodied थिए भने उनलाई, गिर प्राप्त गर्न मानिसहरूलाई blows प्रचारकहरू छ। मान्छे मा यसको ब्रान्ड ज्याकेट Casts र यो भन्छन् "प्रभुको हात।"
नयाँ सुसमाचार बस अमेरिका आएको छ। साथीहरू, यो कुनै न कुनै र कच्चा छ, तर म तपाईंलाई बताउन। जब तपाईं शब्द प्यारामिटर छोड्न, जब तपाईं भन्न: नयाँ कुरा, परमेश्वरको नयाँ कुरा गरिरहेको छ "यो छ? म यसलाई लेखन मा छैन, यो बुझ्न छैन, तर पवित्र आत्मा प्रतिरोध गर्न म चाहन्न। "
साथीहरू, यो बाइबल छैन भने, हामी प्रतिरोध गर्नुपर्छ। नवीनतम तपाईं एक सानो बच्चा रुचि छैन, तपाईं परमेश्वरको राज्यको प्रविष्ट गर्न सक्ने छ। तिनीहरूले सभाहरू समयमा आफ्नो आवश्यकता बनाउन सक्छ भनेर मान्छे डायपर मा लुगा आउनुहोस्। यो नवीनतम छ। साथीहरू, यो जहाँ समाप्त हुनेछ?
पास्टर भन्नुभयो: "यो त टाढा एक दिन भनेर, एक इंजीलवादी खडा र भन्न, भएको छ म प्रभु देखि एक प्रकाश प्राप्त गरेका यसलाई मरियम उपासना सुरु गर्न समय छ।" यो जहाँ बिन्दु जानेछ।
अर्को इंजीलवादी आफूलाई पवित्र भूत bartender भनिएको छ। उहाँले "पवित्र आत्मा को बार र पेय आउनुहोस्।", भन्छन् तिनीहरूले यसलाई नयाँ रक्सी को पेय कल। म मेरो कान मा घन्टी अगमवक्ता शब्दहरू सुन्न, "प्रभुको दिन यहाँ छ, दुष्ट प्रबल, अदालत र वेदी बीच रुन्छ। लुगा को बोरा मा राखे। निश्चित र पतित मान्छे लागि शोक। "
येशूले आउनेछ। जनता अझै पनि unreached छन्। म ख्रीष्टियनहरूलाई पवित्र आत्मा पल्ट, एक मातेका मानिस जस्तै विचलता, हुनेछ मलाई योएल शब्दहरू स्पष्ट छ, "उठ, के तिमीले पिएको हो, र रुन्छ, सबै किनभने बाली क्षेत्र perishes नयाँ रक्सी पिउन जसले तपाईंलाई।" कल के जाने देख्दा
हजारौं को प्राण मर्न, त्यसैले के तपाईं मा हाँसेको छन्? त्यो पवित्र आत्मा पृथ्वीमा सबैतिर काम हुनेछ। तपाईं सबैभन्दा abject र खराब ठाउँमा यसलाई लिन सक्षम हुनुपर्छ। तपाईं गरिब देशहरूमा यो लिन सक्षम हुनुपर्छ। तपाईं मानवता को dregs यसलाई लिनुपर्छ, र यो त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। यो केवल धनी अमेरिका मा काम गर्न सक्दैन। यो पृथ्वीमा सबैतिर काम गर्न छ।
म यी मान्छे अब बाल्कन मा आफ्नो हाँस्न सुसमाचार लिन चुनौती। यस शरणार्थी शिविरमा जाने आफ्नो मानिसहरू गोली गरिएको छ किनभने महिला रो जहाँ। आफ्नो छोरी बलात्कार गरिएको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई भोकै छन्। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई हाँस्न चाहन्छ - तिनीहरूले आफ्नो घर नष्ट, त्यसैले तिनीहरूलाई पट्टी जान सोध्नु। म्याडिसन स्क्वायर बगैचा आउने यो तथाकथित पुनरुद्धार यो गर्मी। तपाईं लिपि, तपाईं को Solemn विधानसभा को बोझ बोकेको गर्न सक्नुहुन्न भने छन्, तपाईं कसरी यस्तो सिद्धान्त लाग्न इच्छुक हुनेछ।
मलाई हाँस्न गर्नुपर्छ जसले तपाईंलाई बताउन गरौं। विश्व। अभक्त अन्यजातिहरू। यो एक अमरीकी भएको छ। एक समय येशू ख्रीष्टको चर्च प्रार्थनाको गोप्य कोठरी फन्दामा पर्छ जब ख्रीष्टको आगमनले त नजिक छ। जब हराएका लागि रूनु पर्छ। जब यो सबै त्यागेर र येशूको पछि गर्ने इच्छा हुनेछ। जब कहिल्यै डलर बिल उल्लेख गर्नुपर्छ। अमेरिकी भगवान। अमेरिकी avgudadyrkandet। विश्व यो पागलपन हेर्दै र उनीहरूले विचार थाहा - पवित्र आत्मा एक ringmaster हुन्छ। यो एक charismatic सर्कस छ।
म मान्छे के अब लाग्छ मतलब छैन। म मतलब छैन मान्छे अब को समाचार पत्र चाहँदैनन् भने। म आफ्नो प्राण र यति धेरै blinded छन् भन्ने तथ्यलाई ख्याल। म उहाँले सेवा गर्न मलाई भनिन्छ छ कि मण्डलीको अगाडि खडा परमेश्वरको सामु एउटा दायित्व छ, र तपाईं चेतावनी र Solemn चर्च यी reproaches र बाइबल तपाईं यो भन्दा शोक पर्छ भनेर भन्छन् भन्छन्। एल्डरहरूले प्रदान गर्नेछ। चर्च, पादरी, को सेवकहरू को प्रचारकहरू। हामी यी गढों तल प्रार्थना गर्नुपर्छ।
अन्तमा, सभा demoralization belittling एक निन्दाले। अन्धकार लागि प्रकाश र ज्योति लागि अन्धकारमा कलहरू कि - दुष्ट राम्रो र असल खराब कल गर्नेहरूलाई धिक्कार। कि यो तीतो मीठो र मीठो तीतो बनाउँछ। (यर्मि 23:15)। म अगमवक्ताहरूले भयानक कुराहरू देखेको छ। तिनीहरूले व्यभिचार, तिनीहरूले falsehood हिंड्न, दुष्ट हात प्रमाण र दुष्ट कुनै फिर्ती।
म बेतोडले मसीही स्त्रीले यो हप्ता एक पत्र प्राप्त भयो। त्यो "आफूलाई मसीही पुकार्ने मेरो श्रीमान्, उहाँले लाखौं खेल्छ, ठूलो प्लेयर छ।", भन्नुभयो त्यो "म खतराबाट र त्यो छ कि कम्पनी बारेमा यति चिन्तित भएको छु।", भन्नुभयो म, लाग्यो "म पास्टर जान उहाँलाई सोध्न।"
त्यो भाइ Wilkerson, तपाईं के भयो, म त, रिसाउनु चोट र भ्रमित छु थाहा छैन ", भन्नुभयो। म हाम्रो पास्टर हाम्रो बहु-लाख जुवा पति पठाए। "
उहाँले म 1 उत्पत्ति देखि प्रकाश गर्न पद खोजी छन् ", भन्नुभयो, र म जुवा विरुद्ध बोल्न भनेर धर्मशास्त्रमा मा केहि पाउन सक्दैन। म यसलाई कुनै पाप देख्न, त्यसैले रमाइलो छ। "उहाँले स्तब्ध थियो," कसरी परमेश्वरको मानिस यस्तो कुरा मेरो पतिको भन्न सक्नुहुन्छ? "
यो ठ्याक्कै यर्मिया, भन्नुभयो छ "pastors evildoers हात साबित र कुनै एक आफ्नो दुष्टताको फिर्ता गर्दछ।" उहाँले र तिनीहरूले सभा demoralization belittled छ किन यसो किन उनि दुष्ट राम्रो र असल खराब र तीतो कल मिठाई र मीठो तीतो।
उहाँले "भविष्यवक्ताहरूलाई व्यभिचार प्रतिबद्ध छ, र falsehood हिंड्न।", भन्नुभयो आफ्नो जीवनमा पाप छ जो कोहीले खडा र शिविरमा पापको बारेमा बोल्न छैन। उसले आफ्नो व्यभिचार, आफ्नै पाप र आफ्नै दुष्ट मन विश्वस्त छ।
म एक कोर्नु भन्दा देश मा कुनै पनि सेवकहरूको आकर्षित छैन। परमेश्वरको लागि सेवकहरू आगो को बहुमत। यस दुष्ट युगमा purified छन् जो जवान सेवक हुन्। म तिनीहरूलाई थुप्रै भेटेको छु र म तिनीहरूलाई लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। पनि यस शहर मा, म मेरो सम्पूर्ण जीवन मा भेट गर्नुभएको सबैभन्दा धार्मिक प्रचारक केही भेट गरेका छन्।
मेरो साथ सेवकहरूको स्कोर पिरोल्छ महसुस र तिनीहरूले देख र दुष्ट छ के प्रकट गर्न सक्ने आवाज पर्खिरहेका छन्। "तिनीहरूले मेरो कोर्ट उभिएर थियो र मेरो शब्दहरू सुन्न मेरो मान्छे पायो भने - उनि बोलेको थियो भने मेरो हृदयमा के छ। तिनीहरूले परमेश्वरको मन बाट बोली थियो भने, तिनीहरूले मानिसहरूलाई टाढा आफ्नो दुष्ट तरिका र आफ्नो दुष्ट कामहरू देखि बन्द छन्। "
एक मानिस परमेश्वरले अन्य, "म तिनीहरूलाई पठाएको छैन, म तिनीहरूलाई बोली छैन बारे भन्छन् थाह यदि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्नै कल्पना बाहिर बोल्न। आफ्नो हृदयमा खराब बाहिर।
"तिनीहरू आफ्नै मनले दर्शन बोल्न, म तिनीहरूलाई पठाउन गर्नुभयो। म तिनीहरूलाई बोली छैन। तिनीहरूले, 'प्रभु भने, तपाईं, शान्ति पाउनेछ' र तिनीहरूले आफ्नो हृदय पछि हिँड्छ र आफ्नै कल्पनामा गर्ने सबैलाई भन्न मलाई नाइँनास्ति गर्नेहरूलाई भन्न 'नराम्रो तिमीहरूमा आउन पर्छ।' " को Solemn विधानसभा गर्न निन्दाले ख्रीष्ट र उहाँको चर्च प्रेम गर्ने सबैलाई लागि सबैभन्दा ठूलो दुःख हुनेछ। आफ्नो नाम र आफ्नो मण्डलीको निन्दाले - यो आफ्नो हृदयमा सबैभन्दा ठूलो दुःख हुनेछ। राज्य विधानसभा भन्दा रो। तपाईं अडान, र तपाईं प्रार्थना र उपवास मार्फत, तपाईं प्रभुको बोझ लाग्न जब जब। परमेश्वरको हरेक बच्चा यस समातिए सबैलाई मुक्त गर्न भनेर प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। यसलाई छुन छैन, यसलाई सबै शरीरका छ अपील लागि जिज्ञासा बाहिर त्यहाँ जाने भने, यो तपाईं पासोमा पार्न हुनेछ, यो नजिकै जाने छैन।
पवित्र आत्मा तपाईंको मासु सामना नगरेसम्म थाहा कसरी, त्यसैले यसलाई टाढा रहनुहोस्। यर्मिया आफ्नो परमेश्वरको प्रभु तपाईंको बीचमा शक्तिशाली छ ", भन्नुभयो। उहाँले त्यो गायन तपाईंलाई रमाउनुहोस् हुनेछ, सुरक्षित हुनेछ। उहाँले आफ्नो प्रेम मा आराम हुनेछ। उहाँले गाइरहेका तपाईंलाई रमाउनुहोस् हुनेछ। "
किन? किनभने उहाँले उहाँको हृदय के grieves भन्दा सन्ताप गर्ने व्यक्ति फेला परेन छ। बोझबाट पूरा उहाँले औपचारिक Township को निन्दाले वहन।
यो एक "प्रेम पासोमा" हुनेछ। तपाईं सुन्न हुनेछ। "हामी सबैको प्रेम। यो तपाईं के प्रचार कुरा छैन। तपाईं सफल छन् भने यो कुरा छैन। वा अरू केहि - यो आफ्नो सुसमाचार के हो कुरा छैन। का प्रत्येक अन्य ठूलो अंगालो दिन गरौं। "कसरी दुई सँगै सहमत बिना हिंड्न सक्छौं। तपाईं यसलाई कसरी हिंड्न सक्छौं तपाईंसँग, जो unbiblical बानी छ तपाईं सक्छन् सहमत छैन। यो प्रेम पासोमा छ। उनि भन्छन्, "कसैले न्याय छैन।"
त्यो बाइबल के भन्छ छैन। यसलाई हामी धार्मिक न्याय न्याय भनेर भन्छन्। निन्दाले र धैर्य साथ डांटनु। म एक रक मा खडा छु, एक साबुन पकवान मा खडा छैन। परमेश्वर, तपाईं सुरक्षित गर्न वार्ड प्रयास गरिरहेको छ।
येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको धन के हो? कि ख्रीष्टमा परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको बुद्धि, ख्रीष्ट सबै हाम्रो हो।
साथीहरू, खबरदार! बाहिर हेर्न!
म डराएका छन्? तपाईं प्रभु बोझ मा लिन तयार छन्। तपाईं आफ्नो शरीरमा यो के गर्न सक्दैन। परमेश्वरको आफैलाई गर्नुहोस्।
समय एक Solemn विधानसभा कल गर्न आएको छ। तपाईंले यी टेप वा पुस्तकहरू कुनै पनि, आफ्नो घर को बाहिर तिनीहरूलाई फालिएको छ भने। तिनीहरूलाई टाढा दिन छैन, तिनीहरूलाई बाल्न। कसैले यी सभाहरूमा सामेल निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि, "म शब्द को starved गर्न चाहँदैनन् भन्न म दु: खी छु र म मेरो हृदय भोकमरी र सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो गर्न चाहँदैनन्। मलाई बढ्न अनुमति कि प्रभु देखि शुद्ध शब्द चाहन्छु। म मेरो शरीरलाई अपील कुनै पनि सन्देश चाहन्न, वा त्यो मेरो हृदयमा लोभ सिर्जना गर्नुहोस्। "
हामीले के आवश्यक छ प्रदान गर्दछ र त्यो चमत्कार गर्छ, तर उसले आफ्नो बाटो मा गर्छ। misappropriating र धर्मशास्त्रको misusing द्वारा छैन।
अब्राहाम भूमिगत लागि देख थिएन, उहाँले निर्माण र परमेश्वरले सिर्जना गरिएको शहर लागि देख्यो।